“Kenya muranka Soomaaliya kala dhaxeeya waxba nagama galin laakiin annaga yeysan nagu xadgudbin” | SalaxleyTV
“Kenya muranka Soomaaliya kala dhaxeeya waxba nagama galin laakiin annaga yeysan nagu xadgudbin”
Marka uu khilaaf dhex maro Kenya iyo Soomaaliya, waxaa la sheegaa inay dhibaato soo gaarto dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Kenya.
Soomaalida ku sugan Kenya waxaa ka mid ah kuwo ka tirsan Jamhuuriyadda Kenya oo daggan dhinaca Waqooyi bari ee dalka Kenya, iyagoo meelo kalena uga sugan.
Dadkaas oo ku dhaqan dhulkii uu gumeysiga raaciyay Kenya ayaa horay dhibaato ku saabsan khilaafka labada dal uga cawday, waxaana ka mid ah tacaddiyo dhacay sannadihii 1980-meeyadii.
Hadda oo ismari waa xooggan oo dhinaca diblomaasiyadda ah uu ka dhaxeeya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya, waxaa soo baxaya walaac weyn oo ay qabaan Soomaalida Kenya.
Kenya maxaa karka ka keenay?
Faarax Macallin Dawaara oo kamid ah siyaasiyiinta ugu caansan Soomaalida Kenya ayaa wareysi uu siiyay BBC-da afeef uga bixiyay arrintaas, isagoo dowladda Kenya ka dalbaday inaysan carada ay Soomaaliya u qabto kula dul dhicin Soomaalida Kenya.
“Annagu haddaan nahay Soomaalida Kenya waxaan soo marnay cadaadin badan, dhac iyo dil. Mar allaale markii ay dhacdo dhibaato yar oo u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya, ama nin burcad ah hadduu waddo istaago oo uu dilo askar Kenyan ah, dhaqan aan qarannimo ku saleysneyn ayey leeyihiin dadkan aan ku dhex nool nahay, kaasoo ah in lagu soo laabto dadka Soomaalida ah, dhib ayeyna noo geystaan iyagoo aan kala saareynin kii burcadka ahaa iyo kii qarannimada Kenya jeclaaba”, ayuu yidhi Dawaara.
Faarax oo horay usoo noqday ku xigeenka afhayeenka baarlamaanka Kenya ayaa sheegay inuusan wadin wax dood ah oo ku saabsan ka go’itaanka Kenya ayna yihiin Soomaali ka mid ah qaranka Kenya, oo dalkana qeyb ku leh.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayu yidhi; “Mar dambe ma aqbaleyno mana u dul qaadaneyno in sharafteenna wax loo dhimo, taas ayaan hadda kasii afeefanayaa, Kenya iyo Soomaaliya hadey muransan yihiin maxkamad haku kala baxaan, shaqo kuma lihin annagu”.
Khilaafka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa salka ku haya muranka xuduudda badda, kaasoo dacwaddiisa ay taallo maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda.